साबधान !फेसबुक चलाउनु हुन्छ ? यसरि ठगिनु होला « Himal Post | Online News Revolution
साबधान !फेसबुक चलाउनु हुन्छ ? यसरि ठगिनु होला
प्रकाशित मिति : २०७३, १२ पुष ०९:२५
सुरुङ्गा (झापा), पुस १२ गते । के तपाई सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) चलाउँदै हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहुन्छ भने होस् गर्नुहोस् । फेसबुककै माध्यमबाट साथी बनिएकाले विभिन्न आश्वासन देखाएर तपाईलाई ठग्न सक्छन् । फेसबुकको साथीको भर पर्दा बिर्तामोड नगरपालिका–७ निवासी सुष्मा प्रधान राई ठगिएकी छिन् । फेसबुकमा बनाएको साथी माटिन एन्थोनी मार्टको भर पर्दा उनी ठगिएकी हुन् ।